Ikhaya elithandekayo - I-Airbnb
Eli gumbi lokulala libini, ibhafu enye ikwidolophu encinci, kufutshane neendawo ezininzi zokuthengisa. Ukusuka kumnyango wangaphambili ukude nje iyure enesiqingatha ukusuka eArches National Park entle kunye neeyure ezi-2 ezinesiqingatha ukusuka kwezinye zezona ndawo zibalaseleyo zokuchithela i-ski emhlabeni! Yiza uhlale kwikhabhoni ukuze ufumane incasa encinci yasentshona kunye nomdla osempilweni wezinto ezintle zangaphandle.
Nje ukuba ungene emnyango uya kufumana ngokuzenzekelayo ukuziva kwangoku, kumbindi-ntshona. Eli khaya likude nekhaya ligcwele i-snacks, imidlalo, izinto zokuhlambela, kunye newasha kunye nesomisi. singasathethi nge Grill ngasemva xa imozulu ivuma!
4.88 · Izimvo eziyi-177
IKhabhoni County yidolophu encinane kakhulu embindini wodederhu lweentaba ezintle. OoMelwane bazolile bazigcine bodwa. Kukho ezinye iindawo zokutyela ezinje ngeJuicer Burger Bar kunye neShepard’s Diner ezizezona ndawo zintle zokutyela ezikufutshane.
Andizi kubakho ngokobuqu ukuze ndincede, Nangona umphathi wepropathi yam eya kuba nako ukukunceda ngazo naziphi na iimfuno.